बढी यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको यौनाङ्ग खुकुलो र कम सम्भोग गर्ने महिलाहरुको यौनाङ्ग कसिलो र हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो किन ? – Tungoon
होमपेज » राेचक » विचार » समाचार » स्वास्थ्य
बढी यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको यौनाङ्ग खुकुलो र कम सम्भोग गर्ने महिलाहरुको यौनाङ्ग कसिलो र हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो किन ?
मानिसहरु सोच्छन्, कम सम्भोग गर्ने महिलाहरुको यौनाङ्ग कसिलो हुन्छ र बढी यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको यौनाङ्ग खुकुलो हुन्छ । के तपाईंलाई थाहा छ, यस्तो सोचाई केवल भ्रम मात्र हो । महिलाको गुप्तांग यौन सम्पर्कपछि पहिलाक अवस्थामा फर्कन्छ ।
यहाँसम्म कि बच्चा जन्माएपछि पनि यौनांग पहिलाकै अवस्थामा फर्कन्छ । जीवनमा केवल दुईपटक यस्तो हुन्छ जतिबेला यौनांगको आकार लामो समयसम्म परिवर्तन हुन्छ । पहिलो पटक बच्चा जन्माएपछि । एक अध्ययनका अनुसार, बच्चालाई जन्म दिएपछि योनीको मांशापेसी पहिलाकै अवस्थामा आउन कमसेकम ८ महिनाको समय लाग्छ ।’ दोस्रो पटक योनीले आकार उमेर ढल्किएसँगै बदलिन्छ । वास्तवमा, उमेर बढ्दै जाँदा महिलाहरुको हर्मोनहरुमा परिवर्तन आउँछ ।
मतलब, उमेर बढ्दै जाँदा यौनांगको भित्ता बाक्लो हुन्छ र कम लचिलो पनि । यसले गर्दा यौनांगको मसल्स खुकुलो हुनजान्छ । उचित अभ्यासबाट मांशापेसीको खुकुलोपनामा सुधार गर्न सकिन्छ । केही योगासनबाट तपाईंको शरीरमा चामत्कारित परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, जसबाट मानिसहरुले तपाईंको उमेर के हो भनेर पत्तै पाउँदैनन् ।
यस अध्ययनको क्रममा पत्ता लागेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यौन सम्पर्कको बेला यदि यौनांग कसिलो पाइयो भने यसको अर्थ एउटै हुन्छ, तपाईंको पार्टनर यौन सम्पर्कको लागि तयार छैनन् । यसको मतलब उन यौनांग कि सुख्खा छ,कि उनी आवश्यक उत्तेजित भइसकेकी छैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले धेरैभन्दा धेरै प्राककिंडा फोरप्ले गर्न आवश्यक छ ।